Tsy miala amin’ny filoha Ravalomanana na higadrana sy hahafaty anay aza hoy Guy Maxime. – MyDago.com aime Madagascar
Ambohim-pihaonan’ny Tia Tanindrazana hatrany ny Kianjan’ny Finoana isan’andro, ny kabary rehetra nifandimby teto dia saika nilaza ny toe-draharaha politika eto Dago avokoa.
I Navalona dia nilaza fa ny fanjakana nalaina tamin’ny hery dia ho afaka amin-kery ihany koa.Nampiasaina daholo ny tetika maloto rehetra nandotona an’ ny filoha Ravalomanana kanefa hita izao fa volamena latsaka ambovoka ny filoha ka tsy avelan’ny hasiny tsy hamiratra.
Ingahy Manoela indray dia nanamafy fa rehefa vita ny momban’i Kadhafi dia ho avy ny anjaran’i Andry Rajoelina. Tsy ilaina ny fidiran’ny miaramila tsy mahasahy mandray andraikitra sy mihenahena fa ny mpanao politika ihany no tokony hamaha ny krizy hoy izy ary ary tsy hisy ny fankatoavana iraisam-pirenena raha tsy mody i Ravalomanana.
Ny solombavambahoaka voafidy tany Manakara teo aloha dia nilaza fa efa voaporofo ankehitriny fa tsy sitrapon’ny FAT ary indrindra i Razanamahasoa Christine no namoahany an-dRalitera sy ny namany. Ny helokan’ ireny manamboninahitra ireny dia ny tsy fivadihany tamin’ny Ravalomanana hoy Mektoub . Fanambaniana ny tafika sy ny manampahaizana no mahazo an-dRalitera izao . Mahay “stratégie”, “mahay hay ady” , “ancien legionnaire” i Ralitera ary fantatry ny FAT fa raha i Ralitera no mijoro dia betsaka no hanaiky azy. Tokony handinin-tena lalina ny mampahaizana satria dia hitsakitsahan’i Andry ny zony toy izany koa ny tafika. Mila mivonona isika manoloana izany, mety ho « chantage » fotsiny ihany koa io resaka io hoy hatrany I Mektoub.
I Guy Maxime Ralaiseheno indray dia nanao fanoharana, raha afrobasket no itantarana ny tranga hatramin’ny 2009 dia 1er quart temps : nihezaka be ny FAT fa nanohitra mafy ny zanak’i Dada ka dia nisy minisitra maro nasorina. 2 ème quart temps : niaraka ny ankolafy 3, tao anatiny anefa dia namoatsampona ny namana sasany ary nanaraka azy ny sasany ary nahakivy ny vahoaka mpitolona sasany.3 quarttemps : nahazo régime tamin’ny Andramena ny FAT ka nanao ny moramora rehetra fa nitsifitra.4 quarttemps mène ny ankolafy 3 ary vonona handray ny jokers Ravalomanana sy Radidy isika hoy ny Ben’ny tanana Ankaraobato teo aloha. Handresy isika satria efa any amin’ny FAT daholo ny tsy Tia Tanindrazana , mahatsapa ny frantsay fa tsy lasa ny paik’ady hitondran’I Andry Rajoelina ny baolina koa dia miheritreritra hanao “explosion sociale” mba hiady ny vahoaka ary esorina i Andry dia soloina joker hafa. Tsy kentrona ny vahaoka malagasy, ekenay ny maha partenaire anareo fa tapitra ny fitondranareo ny firenenay. Miala moramora fa ho mafy ny fianjerana. Tsy ao anatiny ny herinanadro no hafahana hitsabo maimaimpoana ny vahoaka. Tsy hiara-maty aminareo izahay ka rehefa tsy miala ianareo dia izahay no hanala anareo ary miandry izahay satria izany no tenin’ny raiamandreny dia ny hoe milamina. Manaja ny tenin’ny raiamandreny izahay satria tsy mitovy aminareo ary tsy miala amin’ny filoha Ravalomanana na higadrana na hahafaty anay aza izany satria azo tsapain-tanana ny vitan’i Dada.
Auteur Solo Razafy*Publié le 23 août 2011 23 août 2011 Catégories Politique
2 réflexions sur « Tsy miala amin’ny filoha Ravalomanana na higadrana sy hahafaty anay aza hoy Guy Maxime. »
Mitady ny hanatsara ny tenany ny mpanaotrano rehefa nahatsapa fa voahosom-potaka tamin’ny fahita lavitra.Portes ouvertes hono atsy ho atsy.
ehhhhhhh!raha mba mbola ao ihany ianao Atra ! manantena vonjy avy aminao izahay !
Ny Gasy tsy mifamono izany ! tany masina io ! loza ho an’izay manao ts’inontsinona ao
fa tsy ho afa-maina eo izany olona izany.Ary izay olombitsy ireo ireo tsiponina fotsiny dia ho vita ny aminy.
Ny fandosirana tsy ferana.
Précédent Article précédent : Les élections seraient selon Dollin Rasolosoa l’unique sortie à cette crise
Suivant Article suivant : Ho mafy ny fianjeran’ny FAT !